Apple ny iPhone X mihazona Ny Sarobidy Tsara Kokoa Noho Izay mety ho Previous iPhone - China Gracebestbuy International
Apple ny iPhone X mihazona Ny Sarobidy Tsara Kokoa Noho Any Previous iPhone
Raha izay tadiavinao mba hividy ny iPhone izay afaka hitazona ny vidiny, jereo intsony noho ny iPhone Apple X.
Ao amin'ny fanadihadiana vao haingana, fanafoanana orinasa B-Stock nandinika izay manao ny tsara indrindra iPhone asa ny fihazonana ny vidiny. Ny iPhone X tonga eny an-tampon'ny amin'ny alalan'ny fihazonana ny 85% ny vidiny tany am-boalohany ao amin'ny tsena faharoa. Orinasa izay mividy ny iPhone X amin'ny ampahany ny mivarotra ny handset no mahazo azy io ho 75% ny vidiny ny antsinjarany, B-Stock hita, araka ny 9to5Mac, izay nahazo ny dika mitovy amin'ny fianarana.
Apple namoaka ny iPhone X tamin'ny herintaona amin'ny vidiny ambony indrindra izany ve tenifototra mitovana amin'ny orinasa finday avo lenta. Ny base iPhone X modely vidin'ny $ 999 sy ny dikan-miaraka bebe kokoa fitehirizana mandeha ho an'ny $ 1.149. B-Ny tahirin-kevitra Stock X-kevitra ny iPhone mendrika, fara fahakeliny, $ 849,15 amin'ny Fivarotana fanindroany.
Finday avo lenta dia tsy matetika manana ny zava-dehibe tsara. New endri-javatra, nihatsara votoatiny, ary manintona mpifaninana mirona amin'ny fiara be ny vidiny teo. Ny iPhones Apple no very toy izany koa ny tena; fa izy ireo mirona hanao ny tsara kokoa noho ny tena. Araka ny 9to5Mac, B-Stock ny tahirin-kevitra ny iPhone X-kevitra dia nametraka vaovao firaketana an-tsoratra sarobidy noho ny fanaovana ny tsara kokoa noho ny hafa eo amin'ny tsena iPhone.
Azo inoana fa ny hita dia ho an'ny orinasa vaovao tsara izay hahazo nampiasa, na niverina iPhones. Izany koa ny vaovao tsara ho an'ny olona izay manana ny iPhone X ary mikasa ny hampiakatra azy any ho fitaovana vaovao amin'ity taona ity. Raha zavatra hafa, dia Ho any lavitra any defraying ny vidin'ny iPhone vaovao.
Post fotoana: Jul-30-2018